Top 10 mobiles nke 2017 | Gam akporosis
Anyị abatala na ọnwa Disemba, oge anyị ga-eleghachi anya azụ n’afọ anyị biri. Omume a na-ejikarị eme mee ndepụta na nke kacha mma n'afọ. Nke a bụ ihe anyị ga-eme taa, a nhọrọ na 10 kacha mma gam akporo igwe nke ruru ahịa afọ a. Na mgbakwunye, nhọrọ a nwere ike inye gị ụfọdụ echiche maka onyinye ekeresimesi gị.
Afọ 2017 abụwo afọ nke hapụrụ anyị ọtụtụ igwegharị na-adọrọ mmasị n’ahịa. N'ihi ya ahọpụta naanị ekwentị 10 dị ntakịrị. Mana anyị jisiri ike belata ndepụta ahụ na 10 mobiles nke doro anya na o kwesiri ịbụ ndị isi. Ekwentị ole depụtara ndepụta?
Ihe kpatara ngwaọrụ ndị a dị na ndepụta ahụ dị ọtụtụ. Enwere ụfọdụ ndị guzoro karịa ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na echiche ahụ abụghị ilekwasị anya naanị na njedebe dị elu, ma hapụ ezigbo nhọrọ nke ngwaọrụ ndị bara ezigbo uru. Kedụ ekwentị ndị ị chere ga-abụ n'elu 10 a? Anyị na-ahapụ ha niile n'okpuru. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ikwu nke ahụ edozighi ha n’usoro puru iche.
2 Huawei Nwunye 10 / Nwunye 10 Pro
7 Xiaomi My A1
Anyị na-amalite ndepụta ahụ na otu n'ime ọkọlọtọ nke ọtụtụ mba Korea. Samsung amalitela ọtụtụ ngwaọrụ dị elu n'afọ a. Ọ bụ ezie na ọ bụ 8 Galaxy Note a ka enwere ike pụta ìhè. Ngwaọrụ nke kwụpụtara maka ọtụtụ ihe. Ya ebighebi ngosipụta imewe, otu n'ime ihe ndị na-ewu ewu n'afọ, dị irè. Na mgbakwunye, ọ ghọla nke mbụ kachasị elu nke akara aka na nwere igwefoto abuo.
Obi abụọ adịghị ya, ngwaọrụ dị ike nke na-arụ ọrụ nke ọma na anyị na-eme ka ihe oyiyi dị elu dị elu. Ngwaọrụ dị ugbu a na a ọnụahịa nke 779 euro.
Huawei Nwunye 10 / Nwunye 10 Pro
Huawei abụrụlarị otu n'ime ụdị ahịa kacha mkpa na nke kachasị mkpa n'ụwa niile. Ha bụkwa otu n'ime ngwaọrụ kachasị arụ ọrụ na ahịa. Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè bụ nke a Nwunye 10 na Mate 10 Pro. Huawei Mate 10 nwere 5,9 anụ ọhịa ahụ nwanne ya nwoke nke okenye si 6 sentimita. Banyere RAM, nke mbụ nwere 4 GB na nke ọzọ 6 GB. Ha abụọ nwere 64GB nchekwa na a 4.000 mAh batrị. Ngwaọrụ abụọ nwere ogo zuru oke na-egosipụta ọkwa dị elu nke Huawei.
Huawei Mate 10 dị na a ọnụahịa nke 677 euro. Mgbe di na nwunye 10 Pro dị maka 730 euro.
Zụrụ Huawei Mate 10 ebe a
Zụrụ Huawei Mate 10 Pro ebe a
O nwere ike ịbụ ihe nlere na ndepụta ahụ na-eju ọtụtụ ndị anya, mana ekwesịrị ịsị na Akara Spanish na-ahapụ anyị nwere mobiles na-atọ ụtọ. Nke a bụ ikekwe kachasị mma. Ọ ghọrọla onye isi ya. Nwere a 5,2 anụ ọhịa ahụ. Ihe nhazi na-echere anyị n'ime Snapdragon 626 na ihe Adreno 506 GPU. Ekwesiri ighota ya igwefoto azu nke 12 MP, nke di nma maka iji foto abali.
Ngwaọrụ dị ugbu a dị na ọnụahịa nke euro 299 na Amazon. Ọ bụ ezie na ọ bụ nkwalite nwa oge, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe nlereanya a, mee ọsọ ọsọ.
Ahịa ndị China bụ otu n'ime ewu ewu na ahịa. N’afọ a ha ahapụla anyị ọtụtụ igwe. Otu n'ime ndị a kacha mara amara bụ nke a Xiaomi Mi 6. Ndi nwe a 5,15 anụ ọhịa ahụ. N'ime ya nwere nhazi Snapdragon 835 (nke kacha mma na 2017). Na mgbakwunye inwe 6 GB nke Ram na ruo 128 GB nke nchekwa. Na mgbakwunye, o nwere a 12 + 12 MP igwefoto azụ abụọ. Ekwentị dị ike iji zọọ aka na ụdị ndị kachasị ewu ewu na ahịa.
Ngwaọrụ dị ugbu a na a ọnụahịa nke 434,39 euro.
Sony ama ama na ahịa ama ama adaala, ọ bụ ezie na ha hapụrụ anyị igwe na-adọrọ mmasị dị ka nke a Xperia XZ Premium. Ngwaọrụ nwere 5,5 anụ ọhịa ahụ. M n'aka gi Snapdragon 835 dị ka ihe nhazi o nwekwara 4GB RAM na 64GB nke nchekwa dị n’ime. Ọ bụ ezie na igwefoto ya ga-enwupụta, maka ogo ya na maka ọrụ ndị ọzọ dịka Anya Motion ma ọ bụ ijide amụma.
The kpọrọ Sony kasị mma ekwentị na-achọta dị site na 669,31 euro.
Branddị ọzọ nke na-anaghị agafe n'oge ya n'ahịa bụ LG, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Korea na-ahapụ anyị ngwaọrụ kachasị mma. Ha ulo oru elu-elu mobiles afọ a, na LG G6 na LG V30. Ha abụọ kwesiri ị nọ na listi ahụ, n'agbanyeghị na anyị ahọrọla nke abụọ. Ọ pụtara maka ya 6 anụ ọhịa ahụ. Nweta na nhazi Snapdragon 835 n'ime, tinyere 4 GB nke Ram na 64 ma ọ bụ 128 GB nke nchekwa. Ke adianade do, o nwere 13 + 13 MP igwefoto azụ abụọ.
LG V30 dị ugbu a na a ọnụahịa nke 947,92 euro.
Ngwaọrụ a bụ otu n'ime ihe ngosi nke afọ maka otu ihe dị mfe. Ọ bụ ya Ekwentị mbu nke Xiaomi ka ọ zọọ na gam akporo Otu (Dị ọcha gam akporo). Yabụ na ọ bụ ngwaọrụ pụrụ iche. Ọ nwere ihuenyo 5,5-anụ ọhịa. N'ime bụ a Snapdragon 625 processor. Na mgbakwunye na 4 GB nke Ram na nchekwa dị n'ime nke 64 GB. O nwekwara a Igwefoto igwe 12 + 12 MP n'azụ.
Ngwaọrụ Xiaomi dị na a ọnụahịa nke 282 euro.
Companylọ ọrụ ọzọ enweela oge nsogbu n'afọ a, n'agbanyeghị na ọnọdụ ahụ yiri ka ọ na-akawanye mma. Ọ bụ ngwaọrụ kachasị mma nke ụlọ ọrụ Taiwanese wepụtara ruo ugbu a. Nwere a 5,5 anụ ọhịa ahụ na n'ime ya nwere Snapdragon 835 dị ka ihe nhazi. O nwere 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa. Agbanyeghị, ihe pụtara ìhè bụ ya igwefoto, weere otu nke kachasị mma na ahịa. Otu igwefoto 12 MP na azụ, mana nke ahụ dị n'ogo nke igwefoto igwefoto abụọ.
The HTC U11 dị na a ọnụahịa nke 600 euro.
Otu n’ime ekwentị ikpeazụ gara aga n’ahịa. Ọ bụ ọhụrụ version nke elu-ọgwụgwụ wepụtara ọnwa ole na ole tupu mgbe ahụ. Isi ngbanwe dị na imewe ahụ, ebe ọ bụ ugbu a ịkụ nzọ na a enweghi ngwụcha ihuenyo, nke na-enweghị okpokolo agba. Na mgbakwunye inwe akara ngosi kpakpando nke 2017, ruru 18: 9. Ndị ọzọ nkọwa, nke ị nwere ike ịgụ ebe a, ha agbanwebeghị.
Ihe bụ isi nke ngwaọrụ (4GB RAM + 64 GB ROM) dị ugbu a na a ọnụahịa nke 599 euro.
Motorola bụ akara nke jisiri ike laghachi n'ahịa ma chọta ebe ya. Ha ahọrọwo ilekwasị anya n'etiti etiti, na-arụpụta ezigbo ihe. Otu n'ime ekwentị ha kachasị mma bụ nke a Moto Z2 Play, nke kachasị dị n'etiti. Nwere a 5,5 anụ ọhịa ahụ na n'ime ya nwere Snapdragon 626 dị ka ihe nhazi. Ọ nwere 4GB RAM na 64GB nke nchekwa. Na mgbakwunye inwe a 12 MP n'azụ igwefoto. Ke ofụri ofụri, a nnọọ zuru ezu ngwaọrụ na-emesi obi ike ịrụ ọrụ.
Ngwaọrụ dị ugbu a na a ọnụahịa nke 343,99 euro.
Nke a bụ anyị Top 10 igwe nke 2017. Echiche bụ inwe ntakịrị ihe niile, ọ bụ ezie na echere, ọtụtụ ngwaọrụ dị elu. Enwere ọtụtụ ekwentị ndị ọzọ ekwesịrị ịpụta, mana naanị 10 ka ahọrọ. Anyị na-atụ anya na ndepụta a na-adọrọ mmasị gị ma nye gị echiche mgbe ị ga - emegharị ekwentị gị. Kedu ihe ị chere maka ekwentị mkpanaaka Top 10 a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Top 10 ekwentị nke 2017
Leaked oyiyi na nkọwa nke Huawei P11